चितवनको इच्छाकामना गाउँपालिकामा स्थानीयवासीले भन्ने गरेका ‘वनमान्छे’ ! (फोटोफिचर) « News24 : Premium News Channel
चितवनको इच्छाकामना गाउँपालिकामा स्थानीयवासीले भन्ने गरेका ‘वनमान्छे’ ! (फोटोफिचर)
शरद आचार्य र प्रकाश सिग्देल,
चितवन, १६ भदौ । गरिबी श्राप हो या नियति । २१ औं शताब्दीको यो वैज्ञानिक युगमा पनि चितवनको एक परिवार गरिबीको कारण जंगलमा बस्न विवश छन् । अझ अधिकांशले यो परिवारको मुलीलाई वन मान्छे भनेर सम्बोधन समेत गर्ने गर्छन । हुन पनि उस्को हालत र व्यवहार पनि यस्तै छ तर उस्की धर्मपत्नी भन्छिन –गरिबीले इज्जत छोप्न समेत सकिएन ।
चितवनको ईच्छाकामना गाउपालिका स्याङती गाउँका यी पदमबहादुर चेपाङ वन मान्छेका रुपमा परिचित छन् । यस गाउँका स्थानीयवासी पनि चेपाङलाई वन मान्छे भनेर चिन्छ्न् । बिच जंगलमा सानो छाप्रोमा बस्ने र त्यहाको जंगलमा कुनै मानिस काम बिशेषले गए बन मान्छेले जस्तो आवाज दिने र लुक्न जंगल तिर भाग्ने उनको स्वभावले बन मान्छे भन्ने गरिएको स्थानीयहरु बताउछन् । हुन पनि चेपाङको स्वरुप देख्दा सबैलाई अचम्म लाग्छ । उनी सधै लगौटीको भरमा जीवन गुजार्दै आएका छन् ।
घरमा काम काज गर्दा, हलो जोत्दा जंगल गिठा भ्याकुर खोज्न जाँदा उनको चाल वन मान्छेको जस्तै देखिने गरेको स्थानीयवासीको भनाई छ । उनले यही शैलीमा जीवन बिताएको ७० वर्ष भईसकेको छ । चरम गरिबी अभाव अशिक्षाका कारण उनीको शरीरमा अहिलेसम्म लुगा परेको छैन् । बिकट गाउँ पाखामा बस्ती भएका कारण उनको घरमा कोही नपुग्ने र उनिहरु पनि अर्को गाउँमा नजाने गरेका काणले पनि उनीहरुको परिवारमा बाहिरी प्रभाव नभएको र जंगलमै जीवन बिताउने स्वभावका कारण उहाको दैनिकि यसरी वित्ने गरेको स्थानीयवासीको भनाई छ ।
उनको १० जनाको परिवार छ । गरिबिका कारण परिवारको मुखमा राम्रो संग अन्न परेको छैन भने परिवारले जेनेतेने पुराना कपडाहरु लगाएर मुस्किलले शरीर ढाकेका छन् ।
चेपाङको दैनिकी जाडोको बेला अगेनाको छेउमा बस्ने र अरुवेला गिठा भ्याकुर र जंगली कन्दमल खोजेर परिवार पाल्ने रहेको छ । श्रीमानलाई सबैले वन मान्छे भनेर भन्ने गरेको श्रीमती बुद्धीमाया चेपाङको दुखेसो छ । जंगलको बिचमा बस्दा छोराछोरी पाल्न समस्या भएपछि पाखामा झरेर खोरिया फाँडेर बस्दै आएको र आफहरु चरम गरिबी र अभावमा बाच्न विवश बनेको उनको भनाई छ ।
चरम गरिबीमा बाँचेका यो परिवारका १० सदस्य सामान्य टहरामा जीवन गुजार्न बाध्य छन् । घरमा अन्नको गेडो समेत छैन् भने लगाउने कपडा समेत छैन् । जंगलका दाउरा र खोलामा बगेको पानी हेरेर यिनीहरुले भोलिको दिनको सपना देखिहेका छन् ।
न्यूज २४ टेलिभिजनमा शनिबार राति ८ बजेको प्राइम टाइम न्यूजको मेन न्यूजमा यो स्टोरी हेर्न सक्नुहुने छ ।